Anigu waxaan ahay 15 sanno jir. Waxaan lahaa uur waana joojiyay uurka. Dadka kale ee jooga iskuulka waxay igu dhahaan in aan ahay qof dilaa ah, oona dilay ilmahayga. – Tips for refugees
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay gabar 16-sanno jir waxaana saaxiibo la ahay daryeelahayga. Mararka qaar waxaan la aadaa keligeena dabaal. Daryeelayaasha kale waxay u maleeyaan in ay midaani tahay arin aan wanaagsanayn waxayna doonayaan in ay iga celiyaan. Maxay sidaasi u samaynayaan?
Next Next post: Dhammaan saaxiibadaydu waxay ku jiraan barnaamijka Lovoo. Maxay tahay midaasi?